LyX, inopfuura mupepeti weTeX | Linux Vakapindwa muropa
LyX, inopfuura mupepeti weTeX
ZveGnu / linux kune akawanda ehofisi otomatiki masutu anotibatsira kuti tirege kuvimba neMicrosoft Office. Yakakwana kwazvo suites asi zvakare inorema kwazvo. Izvi zvaita vashoma uye vashoma vashandisi vanoshandisa hofisi suite. Nepo chiri chokwadi icho munhu wese ane suite yakaiswa, kunyanya LibreOffice.
Ichokwadi zvakare kuti vazhinji vashandisi havawane kushandisa ese maapplication uye vazhinji vanotoshandisa epamhepo zvirongwa kuita hofisi otomatiki mabasa Ino nguva ticha taura nezve yakazara yakazara izwi processor iyo yatinogona kuisa pane chero Gnu / Linux kugovera uye nekudaro kuzvisunungura pachedu kubva kuhofisi suite, kana isu tikangonyora pakombuta.Chirongwa ichi chinonzi LyX, chinyorwa chinyorwa chinoshanda LaTeX. Izvi zvinoreva kuti iri mhariri yemavara asi zvakare inobvumidza shandisa masvomhu mafomula uye akasiyana LaTeX zviratidzo. Kushanda kwayo ndeye WYSIWYG, ndiko kuti, izvo zvaunoona ndizvo zvaunowana. Hapana chinhu chitsva sisitimu iyo ingangoita ese mameseji edhita anogona kupa.
Asi LyX inoenderera mberi uye iine interface yakafanana neLibreOffice, mushandisi anogona gadzira gwaro rakareruka kana gadzira pdf faira nemavara atakagadzira. Kusiyana nemamwe ma processor ezwi, LyX inotipa iyo chaiyo-nguva kuona iyo pdf gwaro, ndiko kuti, tinogona kuona chero shanduko kana iyo faira rakagadzirwa tisina kuchengetedza pdf gwaro.
Iyo LyX interface yakanyatso kukwana uye mumasekondi mashoma isu tinokwanisa kugadzira chero mhando gwaro, chimwe chinhu chisingaitike neshoko processors yeLibreOffice neCalligra, iyo inoda nguva yekudzidza kugadzira zvinyorwa zvine mavara ezasi kana zvinyorwa zvine masvomhu mafomula.
LyX inogona kuwanikwa mumahofisi epamutemo eDebian, Arch Linux, Gentoo, Fedora, OpenSUSE, Mageia, PCLinuxOS uye Slackbuilds, pamwe nemuzvikamu zvese zvakatorwa kubva pane zvese izvi. Chii chinoita kuti izwi processor iri riwanikwe kune chero mushandisi weGnu / Linux. Kuisirwa kuri nyore uye chirongwa ichi hachina kubhadharwa saka hapana chikonzero chekuyedza LyX uye woona kana zviri izvo chaizvo zvatiri kutsvaga kana kana tichifanira kunamatira neLibreOffice Ndeipi yaunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » LyX, inopfuura mupepeti weTeX
PEDRO JAVIER MARTINEZ DIEZ akadaro
Ndingarege sei kugamuchira maemail aya?
Pindura PEDRO JAVIER MARTINEZ DIEZ
dannyQuest naAmigawave akadaro
Lyx haisi WYSYWYG, ndeye WYSYWYM, verenga zvakawanda kubva kuWikipedia
Pindura kuna dannyQuest kubva kuAmigawave
SUSE Linux inotengeswa nemadhora mazana maviri nemazana maviri emadhora kuboka rekudyara reSweden
Arch Linux 2018.07.01 yave kuwanikwa neiyo nyowani Kernel 4.17